Nweta 120 € nke Unibet bonus na koodu WINCOMPUNI
Unibet nnabata ego: usoro na ọnọdụ nke koodu nkwado ahụ
Ibanye aha na unibet, must ga-anọrị na Belgium. Ikwesiri itinye nọmba gị na njirimara sitere na National Register.
Egwuregwu a anaghị emegherị ndị na-eme egwuregwu dịkarịa ala 18 afọ. Maka poker na cha cha, ị ga-anọ ma ọ dịkarịa ala 21 afọ.
koodu mgbasa ozi ị ga-emepe emeghe nnabata a na-enweta "ego nke mbụ mbụ aha gị" na-emetụta izizi egwuregwu asọmpi izizi na ibi ndụ.. Ga-ahụ nkọwa niile nabatara onyinye a na ndị na-arụ ọrụ websaịtị.
Nkọwa nke ego Unibet
Kọrọ dị ka otu n'ime ihe kachasị ala n'afọ gara aga ego ego French, Unibet Unibet ga-amasị ndị na-emesapụ aka na ịdị mfe nke inweta ya (weta ya ebe a). Ọnụ ọgụgụ kachasị nke 120 € bụ nnukwu ahịa maka ụdị ego a, na njirisi ihe nkenke enwetara. Mgbe nyochachara nke ọma banyere ọnọdụ ahụ, anyị ga-achọ ichikota ya na paragraf niile dị n'okpuru.
Otu ego Unibet si aru oru
1 ego nzọ lọghachiri Unibet, dịnụ mgbe ịmechara nke a ma kwuo koodu WINCOMPUNI na-arụ ọrụ naanị. Maka ọkpụkpọ ọhụụ, tinye ọkacha mmasị ka ị dochie nzọ mbụ Pierre Ménès na-egwuri egwu zuru ezu, ọ bụrụ n’efu. Nanị ihe a chọrọ bụ ka anyị gosi na ọ dịghị ihe ọzọ 1,40, kedu ihe fọdụrụ mgbe egosiri oke ike. Ihe chọrọ? Mgbe m mepere ma gosipụta akaụntụ Unibet m na njikọ njikọ a na koodu WINCOMPUNI, Ekpebiri m ịkụ nzọ 120 na egwuregwu abụọ jikọtara ọnụ na ọkwa nke 4,00. M nzọ na uche? Ana m anata 360 € di ocha ma ihe ndi di na agbago m bara na € 480. Agafefe? Echegbula, Ana m anata 120 € nzọ free ime ya onwe m azụ. Ọ gaghị agbaghara gị.
You ga-achọpụta na ọ bụrụ na ịgbaziri akaụntụ gị emeghị n'oge nzọ nke mbụ gị, Unibet ga-ebufe gị na akpaghị aka 50% nke nzọ mbụ gị, na nke ozo 70% ka emechara ya (70 € ọ bụrụ na etinye 120 €). Ọ bụ ya mere anyị ji agba gị ume ka ị kwado akaụntụ gị n'ihi aha gị na ibe a..
Oke nke nzo di na Unibet
Unibet, ị nwere ike nzọ na ihe ọ bụla, nakwa na egwuregwu ndị ama ama (bọọlụ, bọọlụ, bọl volley…) amaghi ama (Pesapallo Cricket, darts, cyclocross). You nwekwara ike nzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mmeri nke ihe ngosi na-abịa n'eziokwu na-egosi (ọmụmaatụ, X-Factor).
Maka egwuregwu, can nwere ike ịgba nzọ tupu ma ọ bụ n'oge ihe omume, naanị ma ọ bụ na njikọta. Na nke a, ọ nwere ike ịba ụba, dị ka uru. N’aka nke ozo, ọ bụ ihe niile gbasara ịga Paris dị na ekwentị nke dị kpọmkwem na uru akpa.
Nwekwara ike itinye usoro ịkụ nzọ. N'adịghị ka nzọ jikọtara ọnụ, ị nwere ike imeri, ọbụlagodi na ndụmọdụ adịghị mma.
N’ikpeazụ, na-enye grid pụrụ iche Unibet (MultiMax / Toto Super / Nnukwu akara), kamakwa BetUp, gwakọta ajụjụ na ịkụ nzọ egwuregwu.
Banyere ụdị nzo, enwere ọmụmaatụ:
1N2: Ndi meriri otu ndi otu 1, 2 ma ọ bụ ise
Ugboro abuo: mmeri otu na 1 ise / see ma merie otu ahụ 2 / Mmeri Otu 1 ma ọ bụ otu merie 2
Oge akara ọkara
Gba bọọlụ na handerap onye meriri Anderlecht megide Standard na ọpụiche 2,5 buts (Anderlecht 2,5)
Onu ogugu ndi mgbaru oso n’egwuregwu / oge m
Iji nyere gị aka nzọ, ọnụ ọgụgụ dịnụ. Maka egwuregwu ọ bụla, itinye ozi ndị a:
Ọnọdụ ndị otu abụọ ahụ
Ihu ha nke ihu
ọnụ ọgụgụ ebumnuche
Karịa / N'okpuru, obodo / n'èzí na 1/2 ọkara
Egwuregwu Unibet Daashi : ndụmọdụ anyị
Mgbe imepere ma gosi na ndị egwuregwu Unibet gị dị n'otu peeji a, Ndị ọrụ rụọ ọrụ kwesịrị ka eleta ha na Unibet, oge kachasị mmasị eruola: na-etinye nzọ gị nke mbụ na ndị na-ahụ maka ọrụ. Tupu mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ka ị tinye, ma ọ bụrụ na mmefu ego gị kwere, ego nke 120 € na akaụntụ gị. N’ihi? Naanị n'ihi na ọ bụ ya ka ị ga-enweta nloghachi nzọ akwụghị ụgwọ kacha, ihe ekwere nkwa nke ndi akwukwo. Ihe ozo di nkpa, echefula na naanị nha ndị mbụ lara n'iyi na-eme ka ị nweta ego. Ọ bụrụ na ị daa 120 € na ị nzọ dịka ọmụmaatụ 5 paris 20 € naanị 20 € nke free nzo ga-nyere n'okpuru ịnabata ego dị dị ebe a. N’ikpeazụ, buru n'uche na ebumnuche kasịnụ bụ iji merie nzọ nke mbụ gị. Ọ kachasị mma ịnwa ịnweta 200 € net na ezi uche mkpofu, kama igwu egwu 24,00 jikọtara ọnụ nke na-agaghị agabiga. Karịsịa ebe ọ bụ naanị uru net na-enweta site na nha n'efu ga-ewepụ na ezigbo ego (ima ma m nweta 120 € free nzọ ma merie nzọ na isi nke 2,00, enwere m ike ịdọta naanị 120 € ma ọ bụ ihe na-erite uru izizi mbụ).